Windows 7 buut disk - buut jiri kọmputa na Windows 7 buut disk
> Resource> Windows> buut Up jiri Computer na Windows 7 buut Disk
ENYEMAKA! Windows 7 agaghị buut elu!
Naa, ọtụtụ desktop na laptọọpụ abịa na Windows tupu arụnyere na mgbe ị na-azụta ha, na mgbe ụfọdụ Windows echichi diski na-adịghị gụnyere. Mgbe ahụ ihe ọ bụrụ na gị Windows 7 na-aghọ ihe rụrụ arụ ma ọ bụ ada ada na-buut elu?
Buut elu jiri Windows 7 na 2 nzọụkwụ
E nweghị oru okwu, ọ dịghị nkà ọkachamara chọrọ, Wondershare LiveBoot buut CD / USB simplifies ihe niile maka gị. Ị na mkpa ka itinye a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye buut gị Windows. Nke a mberede buut disk maka Windows 7 pụrụ inye aka buut elu ọ bụla na desktọọpụ na laptọọpụ. Tụnyere na Microsoft ikike WinPE 3.0 technology, LiveBoot bụ dakọtara na niile kọmputa ụdị.
Step1. 1 pịa isure bootable CD / USB mbanye
Mgbe wụnye LiveBoot, na-agba ya na ị na-ọkachamara mmalite nke ya. Ebe i nwere ike ọkụ gị Windows 7 buut disk ma ọ bụ USB na nanị 1 Pịa. Fanye a ide CD ma ọ bụ ikwunye na a USB mbanye gị na kọmputa, pịa apa ọkụ button, na ihe nile ga-agwụ agwụ-akpaghị aka. Ị na mkpa na-disk ma ọ bụ USB mgbe na-ere ọkụ na-okokụre.
Cheta na: Ị nwekwara ike na-a Windows 7 reboot diski kpọmkwem site Wondershare tinyere gị iji ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ọ gbaa ya site onwe gị.
Steps2. 1 pịa ka buut elu Windows si bootable CD / USB
Mgbe na-Windows 7 buut CD ma ọ bụ USB mbanye, ikwunye ma ọ bụ ikwunye na ya na jiri Windows 7, na Malitegharịa ekwentị ya. Mgbe usoro amalite loading, pịa F12, ị ga-enweta n'ime buut Ngwaọrụ NchNhr, ebe a họrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive", mgbe ahụ, ị ga-enweta a buut menu dị ka n'okpuru, ma họrọ buut gị na kọmputa site LiveBoot .
Step3. Ịrụzi gị "Windows 7 agaghị buut elu" nke
Mgbe WinPE akpụkpọ ụkwụ elu, ị ga-ahụ isi interface nke LiveBoot. Na-aga "Windows Iweghachite", na ị na-na "Iweghachite Center", nke na-akpan mere maka PC beginners. Ebe i nwere ike na-a ngwọta zuru ezu setịpụrụ ịrụzi dị iche iche Windows egbu egbu na-akpata.
Ị nwere ike agbake MBR, Windows buut faịlụ, nkebi buut oru, ndekọ na gị Windows ndabere faịlụ a na mgbake center na naanị otu click na yiri taabụ. Mgbe mgbake okokụre, reboot gị na kọmputa na ị ga-ahụ gị na Windows 7 bụ azụ.
Ọzọkwa, mgbe ị nọ buut gburugburu ebe obibi, ị nwekwara ike sọfụ online na Internet Explorer, nke a na ike na bootable LiveBoot CD.